मासु र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले ७५ % अनुदान दिने, बैंकले ऋण नदिए सरकार आफैले दिने | आर्थिक अभियान
मासु र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले ७५ % अनुदान दिने, बैंकले ऋण नदिए सरकार आफैले दिने
जेठ २७, इलाम । मासु र दूग्धजन्य उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बताएको छ ।
प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिमिल्सिनाले मासु तथा दूग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बताएका छन् ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजनाले प्रदेश-१ मा सञ्चालन गरिरहेको उप-आयोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सचिव तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले यस्ता आयोजनाका समीक्षा बिरलै हुने गरेको भन्दै अझै राम्रो गराउन पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । '१ वर्षमा अझै राम्रो बनाउन हामि सबै तयार छौं, यसका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,' उनले भने।
सरकारी तवरबाट केही काम गर्न नसकिएको भन्दै दूध, पाठापाठी बाहिर पठाउन सहयोग गरिने पनि उनले बताए ।
'यो कृषकको समस्याको रुपमा रहेको छ । यसको लागि रणनीती तय गरेका छौं' उनले भने, 'मासु र दूधको उत्पादन वृद्धि गर्नेलाई ७५ प्रतिसतसम्म अनुदान सहयोग गर्ने नीति तय गरेका छौं ।'
परियोजना सञ्चालकको बढी अपेक्षा हुने गरेको हुन्छ । अपेक्षा अनुरुप नभए यो क्षेत्रबाटै बाहिरिने प्रमुख समस्या छ । नियामवली पास भइसकेको र संघ र स्थानीयतहसंग नदोहोरिने गरी कार्यक्रम तय गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
ठूला वित्तीय संस्था (बैंक)ले काम नगरे पनि फरक ढंगबाट सानो ऋण लिन पाउने गरि नियमावलीमा समेटिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले समूह र सहकारीले राम्रो गरेको बताउँदै सामान्य समस्या आउँदैमा नआत्तिन कृषकलाई अनुरोध समेत गरे ।
यस्ता आयोजना सञ्चालनबाट दूधमा ४० र मासुमा २० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्दै अगाडि जान सकिने उनको विश्वास छ ।
आँपमा परनिर्भरता : ११ महीनामा ७२ करोडको आयात [२०७९ असार, १३]
रूसमाथि तेलपछि सुन निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध, तेलकै जसरी सुनको मूल्य पनि बढ्न सक्छ ? [२०७९ असार, १२]
गाडी भाडा घट्यो, कहाँको कति ? (सूचीसहित) [२०७९ असार, १२]
पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशतले घटाउन संसदिय समितिको निर्देशन, कर घटाउँदा कतिमा आउँछ पेट्रोल ? [२०७९ असार, १०]
महँगीको मारमा उपभोक्ता, सरकार रमिते [२०७९ असार, १०]
मासु र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले ७५ % अनुदान दिने, बैंकले ऋण नदिए सरकार आफैले दिने [२०७९ जेठ, २७]